Beta-da tobnaad ee watchOS 5 ayaa hadda loo heli karaa horumariyeyaasha | Wararka IPhone
WatchOS 5 Beta XNUMX Hadda Waxaa Loo Heli Karaa Horumariyaasha
Bishii Ogosto ee la soo dhaafay, waxay ahayd bil ay ka buuxaan betas, wax aan u soo wicin dareenkeenna maadaama ay tahay bisha sanadka ee ay tahay Apple si loo saxo dhammaan noocyada nidaamyada hawlgalka ee la sii deyn doono bisha Sebtembar oo dhan. Nidaam kasta oo qalliin wuxuu ku jiray heerar kala duwan oo cusbooneysiin ah, sababo la xiriira dhibaatooyinka kala duwan ee soo muuqday, wax caadi ah oo ah beta.
Ragga ka socda Cupertino waxaa lagu qasbay inay bilaabaan laba maalmood ka dib beta-kii ugu dambeeyay ee iOS 12, beta cusub si loo xalliyo farriinta farxadda leh ee si isdabajoog ah loo soo bandhigo mar kasta oo qalabka la furo oo nagu booriyay soo dejiso cusbooneysi cusub oo aan la heli karin. Dhowr saacadood ka dib, Apple ayaa sii daayay beta tobnaad ee watchOS 5, oo ah beta loogu talagalay oo keliya horumariyeyaasha.
Beta tan tobnaad, wuxuu yimaadaa toddobaad kadib markii la sii daayay beta sagaalaad Iyo ku dhowaad laba bilood ka dib markii la bilaabay beta-kii ugu horreeyay, beta-kii ugu horreeyay ee la bilaabay isla markii uu ahaa shirkii horumarinta ee Apple ay soo bandhigtay dhammaan wararka ka iman doona gacanta tvOS 12, iOS 12, watchOS 5 iyo macOS Mojave.
Beta-kan, sida dhamaan watchOS betas, Waxaa heli kara oo keliya isticmaalayaasha leh astaanta soo-saaraha lagu rakibay aaladahaaga oo xilligan la joogo, umma muuqato in Apple damacsan yahay inuu si cad u soo bandhigo, maaddaama sida kaliya ee qalabka lagu soo celin karaa ay ku jirto Bakhaarrada rasmiga ah ee Apple.
Si loo rakibo beta, noo Apple Watch waa inuu lahaadaa ugu yaraan 50% batari, lagu dalacayo laguna dhejinayo iPhone, maadaama ay aaladani kuu soo dirayso cusboonaysiinta si aad u rakibto.
watchOS 5 waxay kaliya la jaan qaadi kartaa taxanaha 1, taxanaha 2 iyo taxanaha 3, isagoo ah tusaalaha koowaad ee Apple Watch, taxanaha 0, kan kaliya ee looga tagay wareegan cusbooneysiinta, seddex sano kadib markuu suuqa soo gaadhay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » WatchOS 5 Beta XNUMX Hadda Waxaa Loo Heli Karaa Horumariyaasha
Twitter wuxuu dooran karaa inuu soo bandhigo liiska isticmaaleyaasha si looga baxo
Shilkii ugu horreeyay ee iskiis u dhaca ee shirkadda Apple